I-ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines Abakhiqizi, abahlinzeki - China ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
Ukusebenza Nesici ► Kufanelekile ukufakwa kwe-butt ngamapayipi epulasitiki nokufakwa okwenziwe ngezinto ze-PE, PP ne-PVDF. ►Iqukethe ifreyimu eyisisekelo, iyunithi ye-hydraulic, ithuluzi lokuhlela, ipuleti lokushisa, ubhasikidi nezingxenye zokuzikhethela. ► I-PTFE ekhiphekayo ebamba ukushisa ipuleti enesistimu yokulawula lokushisa enembile. ► Ukucindezela kokuqala okuphansi kuqinisekisa ikhwalithi yokushisela ethembekile yamapayipi amancane. ► Indawo yokushisela eguqukayo inika amandla ukufakela ukufakwa okuhlukahlukene kalula. ► Imitha yengcindezi enembile futhi eshaqisayo ephezulu ...
Umshini wokuhlanganisa we-24 ~ 36 intshi
Ukusebenza Nesici ► Kufanelekile ukufakwa kwe-butt ngamapayipi epulasitiki nokufakwa okwenziwe ngezinto ze-PE, PP ne-PVDF. ►Iqukethe ifreyimu eyisisekelo, iyunithi ye-hydraulic, ithuluzi lokuhlela, ipuleti lokushisa, ubhasikidi nezingxenye zokuzikhethela. ► I-PTFE ekhiphekayo ishisa ipuleti efudumele ngohlelo lokulawula lokushisa olunembile. ► Ukucindezela kokuqala okuphansi kuqinisekisa ikhwalithi yokushisela ethembekile yamapayipi amancane. ► Indawo yokushisela eguqukayo inika amandla ukufakela ukufakwa okuhlukahlukene kalula. ► High olunembile futhi shockproof ingcindezi mete ...
Umshini wokuhlanganisa we-24 ~ 48 intshi
Umshini wokuhlanganisa we-2 ~ 6 intshi
Umshini wokuhlanganisa we-8 ~ 18 intshi
Umshini wokuhlanganisa we-4 ~ 12 intshi